Madaxweynaha Uganda oo farriin u soo diray dhiggiisa Soomaaliya. – Radio Daljir
Madaxweynaha Uganda oo farriin u soo diray dhiggiisa Soomaaliya.
Febraayo 18, 2017 10:33 g 0
Waxaan ku faraxsanahay, anigoo ku hadlaaya magaca dowladda iyo shacabka Jamhuuriyadda Uganda iyo farxad ii gaar ah, inaan idiin Gaarsiiyo salaan dhiiran iyo hambalyo shakhsi guushiidoorashada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Mudane, doorashada lagu doortay waxay marag cad u tahay aaminaadda iyo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ay kuu hayaan iyo rajada weyn ee mustqaqbalka Soomaaliya iyo gobolkaba.
Wakhti dheer ayay Soomaalidu nabad iyo horumar baadi goob ugu jirtay. Uganda ayaa garab taagan Soomaaliya si loo helo nabad waarta iyo xasiloonida walaalaheena Soomaaliyeed. Waxaan, sidaas darteed, aan isku halaynaynaa hoggaankaadasi ad u qaadaan tallaabooyin macquul ah oo lagu xaqiijinayo nabad iyo horumar.
Soomaaliya waxay u baahan tahay hay’ado xoogan oo jiri kara wakhti dheer kana madax banaan shakhsiyaad iyo siyaasad kooxeed – Hay’ado oodalka horumar u keeni kara. Kuwaasi waxaa ka mid ah booliska, ciidamada qalabka sida, hay’adaha rayidka iyo hay’adaha maaliyadda, iyo kuwo kale. Waxaad sameyn kartaa wixii aan sameynayxiliyadii hore ee kacaanka –Inad abuurto dhaqdhaqaaq arday.
Mudane, waxaan kuu rajeynayaa guul.
Fadlan iga aqbal hubaasha tixgelintayda ugu sareysa.
MADAXWEYNAHA JAMHUURIYADDA OF UGANDA
9-kii Feberaayo, 2017
PO / 11
DHEEGYSO-Madaxweyne ku-xiegeenka Puntland oo arrimo badan kahadlaya.